We She Me: သမီးလေး ဖွားစဉ်က (၅)
Myo Kyaw Htun - 7/20/07, 5:19 PM
N3 - 7/20/07, 6:20 PM
တကယ့်ကို အသေးစိတ်ရေးနိုင်တာပဲ.. ရေးနိုင်စွမ်းကို လေးစားပါတယ်.. :)..
We She Me မိသားစုဝင် ၃ ယောက်လုံး ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ပါစေ..
imaginary clouds no2 - 7/20/07, 11:12 PM
Andy Myint - 7/21/07, 1:33 AM
ကိုမျိုးကျော်ထွန်းရေ.. အခုလို စောင့်ပြီး အားပေးတာကို ကျေးဇူးလည်းတင်၊ အားလည်း နာပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း အချိန်ရရင် ရသလောက် အမြန်တင်လိုက်ပါမယ်။ စကားမစပ် ခင်ဗျားရဲ့ Technical Comment ကို Post တစ်ခုအနေနဲ့ ဒီဟာ ပြတ်သွားရင် တင်လိုက်ပါရစေ။
ညီမN3 ရေ... ဒါတောင် သိပ်မစိတ်ရသေးပါဘူး.. အဟဲ။ ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ။
မပူနဲ့ ကိုယ့်ဆရာ.... ကိုယ်တွေ့ဆိုရင် အသည်းယားဖို့တောင် အချိန်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
Anonymous - 7/21/07, 4:01 AM
မောင်မျိုးကလည်း ကလေးမွေးတာ စောင့်ဖတ်နေတယ်ဆိုတော့ ၊ နည်းနည်းအံသြသွားတယ်း)
ကိုအင်ဒီရေ.. ပရိပ်သတ်များလာပြီနော်း) ခုလို တကူးတက အချိန်ကုန်ခံရေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ ။ Ur posts about ur daughter's birth r really one ofakind in burmese blogosphere!
Andy Myint - 7/21/07, 5:44 PM
မြန်မာ Blog တော်တော် များများ (အကုန်လုံးနီးပါးပါပဲ) ကို အမြဲတမ်းလိုလို လည်ပတ်ပြီး အသေအချာ ဖတ်တတ်တဲ့၊ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း Blog ကောင်းကောင်း တစ်ခုရှိတဲ့ မဂျစ်တူးရဲ့ Comment ကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် ဆုတံဆိပ် တစ်ခုပါပဲ။ ကျေးဇူး။
Ma Yangon Thu - 7/21/07, 11:19 PM
ဒီပို့စ်တွေကို ဖတ်ရတာ တကယ်ကို ဗဟုသုတရပါတယ်။ စာဖတ်ရင်း Andy နဲ့အတူ မွေးခန်းထဲရောက်နေသလိုပဲ..
ဖတ်နေရင်းကလည်း အမေ့မျက်နှာကိုပဲ မြင်မြင်နေတယ်.. နောက်လာမဲ့ပို့စ်တွေကိုလည်း စောင့်ဖတ်မယ်..
ဟဲ..ဟဲ.. Apply လုပ်သင့်တဲ့အခါကျ လည်း လုပ်ရတာပေါ့လေ..
Andy Myint - 7/22/07, 1:56 AM
ဟုတ်တယ်...အစ်မ။ ကလေးမွေးတာ ဘာကြောင့် ဒီလောက်တောင် အော်ရမှန်း အဲဒီနေ့ကမှ သိသွားတယ်။ အမေက ဘယ်လိုများ ကျွန်တော်တို့ကို မွေးထာမှန်း အလေးအနက် ပိုထားမိသွားတယ်။
ကောင်းတယ်... အစ်မ.. မြန်မြန် Apply လုပ်လေ.. အဟဲ။ ကလေးမွေးခွင့်ရတာ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ Blessing တစ်ခုပါပဲ။ အစစ အရာရာ အခြေအနေ အကြောင်းအကြောင်း တိုက်ဆိုင်လို့ ဒီလို မွေးခွင့်ရတာပါပဲ။
(အဲဒီကျရင် လည်း Post တင်လိုက်ဦးနော်။ ရန်ကုန်သူ တောင်ကြီး အကြောင်းရေးတာတောင် သူသိတာထက် ပိုသိနေတယ်လို့ တောင်ကြီးသူ သူမကပြောနေတယ်။ အစ်မရေးရင် စိတ်ဝင်စားဖို့ ပိုကောင်းမှာ။ အဟဲ။ အတည်ပြောတာပါ။)